managalbar-hanuman Archives - Sabal Post managalbar-hanuman Archives - Sabal Post
ॐ मंगलबार हनुमानको पूजा-पाठ गरे, हर मनोकांक्षा हुन्छ पूरा ! हेर्नुहोस् अनी सेयर गर्नुहोस् !!
Posted on 16/07/2019 by Sabal Desk
शास्त्रअनुसार कलियुगमा सबैभन्दा चाँडै प्रसन्न हुने देवताका रुपमा हनुमानजीलाई लिइन्छ । मंगलबार हनुमानजीको जन्म भएको र यो दिन हनुमानजीको विशेष पूजा–अर्चना गरे सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्ति हुने विश्वास गरिन्छ । हनुमानजीलाई प्रसन्न पार्न सकेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिको कार्य आफै सम्पन्न हुने भनाइ पनि छ । भगवान श्री रामका परम भक्त हनुमानजीको पूजामा केही विशेष कुरामा ध्यान दिनु पर्ने पण्डितहरुको भनाइ छ । मंगलबारको दिन हनुमानजीको पूजा–पाठ गर्ने व्यक्तिलाई सफलता, शौभाग्य मिल्नुका साथै मांगलिक दोष तथा क्रोध नियन्त्रण जस्ता दुष्प्रभावबाट मुक्ति मिल्नेछ । यस्तै जीवनको सबै मनोकांक्षा पूरा हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
Posted in साहीत्य \_आध्यात्मTagged managalbar-hanumanLeaveaComment on ॐ मंगलबार हनुमानको पूजा-पाठ गरे, हर मनोकांक्षा हुन्छ पूरा ! हेर्नुहोस् अनी सेयर गर्नुहोस् !!